सावधान ! यी १० लक्षण देखिए बुझ्नुस् क्यान्सर लाग्यो….::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, पुस ३, २०७३
क्यान्सरले ज्यान लिन्छ । चाहे तपाइँ धनी हुनुहोस् या गरिव । हुने खाने होस वा हुँदा खाने क्यान्सरले छोड्दैन । तर क्यान्सरको शुरुवाती कालमा चाल पाइयो भने आफूलाई बचाउँन सकिन्छ । तर सामान्यतः अधिकाँश मानिसले यस्ता शुरुवाती लक्षणलाई वेवास्ता गर्ने गर्छन् । हुनत यो बढाइचढाइ जस्तो पनि लाग्न सक्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार क्यान्सरको शुरुवातीकालमा निम्न लक्षण देखिन्छन् :
अमेरिकी क्यान्सर उपचार केन्द्रका अनुसार मुख भित्र घाउ देखिनु र सन्चो नहुने भयो भने क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ । यसलाई मुखको क्यान्सर भनिन्छ । मुखको क्यान्सर भएपछि मुख भित्र भएका साना साना घाउ हप्तौं वा महिनौं सम्म सन्चो हुँदैनन् । दुखाइ नभएपनि यस्तो घाउ रहिरहने समस्या क्यान्सरको लक्षण हो ।
अधिकाँश क्यान्सरको साझा लक्षण मानिन्छ वजन घट्नु । यदि तपाइँको शरीरमा रहस्यमयरुपमा वजन घटिरहेको छ भने यो विभिन्न क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ । अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार वजन घट्नुको कारण खुल्न सकेन भने यो क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ ।
निरन्तर न्युज हेर्नको लागि मिडिया डबली डटकमको अफिसियल पेज लाई एक लाइक गर्दिनु होला :-
३ करोड नेपालीले हेर्ने पर्नी भिडियो
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध बिरोध (भिडियोसहित )
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले निकाल्यो विज्ञप्ति: डा गोविन्द केसीलाई अविलम्ब रिहाइको माग
जुम्लामा केसी : काठमाण्डौमा काप्यो सरकार !
प्याज खानुहुन्छ ? यसरि दिन्छ घण्टौँ यौन आनन्द ! [ विधिसहित ]
आजबाट डा. केसीको १५औँ अनशन
निमूखा जनताका लागि आफूले ल्याएको कार्यक्रम ओलीले काटेपछि गगन आगो, संसदबाटै थर्काए